FARITRA ANALANJIROFO : FITSIDIAM-PARITRA NOTANTERAHIN’NY MINISITRA LEFITRA MISAHANA NY TANORA. – Ministère de la jeunesse et des sports
FARITRA ANALANJIROFO : FITSIDIAM-PARITRA NOTANTERAHIN’NY MINISITRA LEFITRA MISAHANA NY TANORA.
30 août 2021 Com Com Non classé 0
Feno ny fandaharam-potoana nentina namaranana ny fidinana ifotony izay nataon-dRamatoa Juliana RATOVOSON, Minisitra lefitra misahana ny tanora tao Maroantsetra.
Nisy ny dinika niarahany tamin’ireo Ben’ny Tanana rehetra miisa 20 mandrafitra ny Distrikan’i Maroantsetra sy ireo fikambanam-behivavy 8 martsa ary ireo zanak’Alaotra Mangoro monina ao amin’ny Faritra.
Ary anisan’ny zava-dehibe ny nanokanany fotoana niarahana tamin’ny tanora, izay sambany ho an’ny tanora teo amin’ny Faritra Analanjirofo ny nahazo sehatra iresahana mivantana amin’ny Minisitra lefitra mpiahy ny tanora tahaka izao. Nivoaka ny hetahetan’ireo tanora, ny maharary azy ireo ary indrindra ny ezaka vitan’izy ireo. Naharitra ny fotoana ary hita fa
zava-dehibe ny dinika nifanaovana tamin’ireo tanora ireo.
Nampanantena ihany koa Ramatoa Ministra lefitra fa hiverina tsy ho ela, hanatsara ny tranoben’ny tanora sy hitondra ny fampitaovana amin’izany. Ary nanamafy ny fahavononany amin’ny fampiroboroboana ny tanora malagasy.
Tsy adinony ny nankasitraka an’ireo vahoakan’ny Maroantsetra, ny Governoran’ny Faritra Analanjirofo, ireo manam-pahefana sivily sy miaramila, indrindra ireo Tanora.
MAROANTSETRA : FANKALAZANA NY ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN’NY TANORA
TOAMASINA: FAMPIOFANANA IREO TANORA TAO AN-TOERANA
Je vous souhaite les bienvenues sur le site web du Ministère de la Jeunesse et des Sports de Madagascar.Le Ministère de la Jeunesse et des Sports, de par sa dénomination,…
MALAGASY RUGBY: FIFANARAHAM-PIARAHA-MIASA
FITSIDIHANA ARA-POMBA OFISIALY NATAON’NY MASOIVOHON’I JAPANA MIASA SY MONINA ETO MADAGASIKARA AN’ANDRIAMATOA MINISITRY NY TANORA SY NY FANATANJAHANTENA
MINISTERAN’NY TANORA SY NY FANATANJAHANTENA: FANAOVANA VAKSINY JANSSEN HO AN’IREO MPIASA
DECRET N° 2021-865 Fixant les attributions du Ministre de la Jeunesse et des Sports et du Vice-Ministre chargé de la Jeunesse ainsi que l’organisation générale de leur Ministère
© DSI - MJS